Ino Vaovao ? Gazetim-paritra, loharanom-baovao, fiantsenana SABOTSY 18 MEY 2013
TRATRAN’NY ODY FITIA : Ritran’ny sipany ny harenan-drangahy ka tanam-polo sisa nentina nody Tanam-polo sisa ilay rangahy nanana ny lazany teo amin’ny fiarahamonina nisy azy. Ny fiarahana tamina vehivavy iray nahasarika azy no nahatonga izany.
Ny ratsy kely lalana ny amin’ny fitiavan-tena sy ny fitsiriritana ny harenany. Nataon’ilay vehivavy izay ahazoana ny fon’io lehilahy io mba hahazoany izany.
Feno nenina tanteraka ilay raim-pianakaviana nandao ny tokantranony noho ny fampirafesana. Lany tamingana avokoa ny harena nohariany tao anatin’ny taona maro vao tonga saina ny lehilahy.
Nangala-pitia tamina vehivavy iray mpiara-monina amin’izy ireo ihany izy io. Vao niaraka kelikely anefa izy ireo dia tsy tompon’ny tenany intsony ity raim-pianakaviana ity fa nisavoamboana teny ny fiainany satria tratry ny ody fitia.
Niafara tamin’ny firaisany trano tamin’io vehivavy io izany ary nafoiny tanteraka ny vady aman-janany. Ilay vadiny ara-dàlana noho ny henatra amin’ny mpiara-belona dia tsy nanakorontana mihitsy ny fiarahan’izy ireo. Taty aoriana anefa dia ritran’ilay sakaizany avokoa ny fananan’io rangahy io.
Naverina amin’ny vadiny « Nikorosifahana ny tanteraka ny fiainako vao tonga saina aho. Soa fa nisy namana mba nanoro hoe misy olona afaka manarina ny fiainana amin’ny ratsy hataon’olona ny tena. I Aina, mpitsabo eny Itaosy no natoroany ahy ary azoko tamin’ny laharana 034 29 026 68 izy. Tsy nisalasala izy ny handray ahy. Tsotra ny torohevitra nomeny ahy raha te-hiala amin’ny fangejana mahazo ahy aho. Narahiny vavaka ny momba ahy, izay tratran’ny ody fitia ary tafaverina soa aman-tsara amin’ny vady aman-janako aho », hoy ilay rangahy. « Tsy manana olana amin’ireto farany aho fa mainka aza mitombo ny fifankatiavanay.
Nohamafisin’i Mpitsabo ny hery sy ny fahasoavana ananany manokana no hoentiny hanasovana ny mpiara-belona amin’ny fitsaboana hataony amin’ireo mila vonjy aminy », hoy ihany ny fanazavany.
Tsy mampiasa tapa-kazo na mametra fadifady ho an’ny olona tonga ao aminy io mpitsabo io. Manana fahazoan-dalana ara-dàlana avy amin’ny minisiteran’ny fahasalamana ireo mpikambana ao anatin’ny fitsaboana nentim-paharazana.
2020	Namoaka biletà tokana amin’ny endriny vaovao ny Cenit FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA (280) 17 mai 2013
Mpandeha efatra naratra navadiky ny Bajaj teo amin’ny lalana PK5 LOZAM-PIFAMOIVOIZANA (187) 17 mai 2013
Nodimandry ny alakamisy teo ny Pasitera Andriamanjato Richard MISAONA NY POLITIKA (182) 17 mai 2013
Naaton’ny Vondrona Eoropeana ny fanampiana ara-bola FAMATSIANA NY FIFIDIANANA (113) 17 mai 2013
Manahy ny ho fahavitsian’ny mpitsidika ireo mpandraharaha HARATSIAN-DALANA FOULPOINTE (90) 17 mai 2013
82 ny lozam-pifamoivoizana nitranga tamin’ity taona ity TOAMASINA RENIVOHITRA (73) 17 mai 2013